Sariitatry Ny Charlie Hebdo Momba An’i Aylan Kurdi, Miteraka Andiana Adihevitra iray Hafa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2015 5:18 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Deutsch, Italiano, Français, English
Niteraka resabe teo amin'ny sehatra iraisampirenena indray ny Charlie Hebdo, ilay gazetiboky frantsay mpanaraby amin'ny eso. Nahatonga ireo mpamaky azy hanontany tena raha toa ka maneso ilay zazakely maty ilay famoahany sariitatra momba an'i Aylan Kurdi tamin'ny 2 Septambra, ny valintenin'ny Eoropeana amin'ny olan'ny mpifindramonina, na zavatra hafa. Vitan'ilay gazetiboky ny nandrehitra adihevitra iray vaovao momba ny olan'ny fahalalahana maneho hevitra.
Lasa mariky ny olana Mediteraneana i Aylan Kurdi, ilay zazakely siriana tsy ela akory izay no natsipin'ny rano teny amorontsirak'i Tiorkia ny vatana mangatsiakany. Nandeha taminà sambo mpitondra mpifindramonina izy sy ny reniny ary ny rahalahiny sy ireo 20 hafa mpitsoaponenana izay nizotra ho any Kos, Nosy Grika. Saingy rendrika ny sambo, ka nahafaty an'i Aylan sy 11 hafa, isan'ireny ny reniny sy ny rahalahiny.
Lasa lavitra loatra ianareo ry #CharlieHebdo, mahakivy. Aza afangaro ny fahalalahana maneho hevitra sy ny kabary fankahalàna
Ity ny sariitatra iray hafa nataon'ny #CharlieHebdo momba an'i #aylan . Iza tamin'ireto mpilomano ireto no tsy mbola tompondaka mihitsy?
Mankaloiloy…Izao ve no fahalalahana maneho hevitry ry zareo? Manaraby zazakely maty? Tian-dry zareo ny hanafintohina ny fihetsempon'ny olona…Tsy misy atidoha #charliehebdo #aylan
Vitan'ny Charlie Hebdo ny mandatsa an'i #Aylan Kurdi, ilay zazalahy kely maty an-drano, noho ny resaka sary manaraby. Henatra ho anareo ry #CharlieHebdo
Voan'ny #CharlieHebdo izany izao ny media tandrefana amin'ny fanarabiana an'i #Aylan. Fotoana izao ahatsapantsika fa tsy misy zavatra azo andrasana amin'ireo afa-tsy ny maha mpanao gazety tsy tomponandraikitra azy
Tsy maneso an'i #Aylan mihitsy ny #CharlieHebdo fa ireo firenena kapitalista izay indrisy fa tsy miraharaha ny fangirifirian'ireo mpitsoa-ponenana. Izay no fahitako azy
Tsy felaka ho an'ny Eoropeana ve ny sariitatra nataon'ny #CharlieHebdo momba an'i #Aylan, manaraby azy ireo, fa tsy hoe….?
Marobe ireo gazety, isan'ireny ny The New York Times, The New Yorker, Bloomberg View, sy ireo hafa maro no namoaka lahatsoratra manazava ny hevitra hafa ao ambadik'izy ireny (toy ny vola vy, manana lafy roa). The New York Times, ohatra, milaza fa voalohany indrindra dia mamely ny “valinteny feno fihatsaram-belatsihin'i Eoropa momba ny olan'ny [mpitsoa-ponenana] ireny sariitatra ireny”.
Tranonkala iray antsoina hoe Fantaro Charlie Hebdo no mamaky bantsilana ny hafatra ambadik'ireo sariitatry ny gazetiboky amin'ny ankapobeny, tamin'ny fanolorana ohatra avy aminà sariitatra hafa izay navoaka tany aloha. Hoy izy :
Ny anjarako tamin'ilay sariitatra farany nataon'ilay gazetiboky: Eny, azoko ny ‘vazivazy’ #CharlieHebdo momba an'i #Aylan. Ary dia maharikoriko ilay izy
Nanoratra lahatsoratra iray i Ramdani ho an'ny Al Arabiya, izay nilazàny hoe: